Iindaba - iMarike yobucwebe beDiamond, ukhuphiswano phakathi kwetekhnoloji kunye nokuthandana
Iidayimani ezenziwe ngokuvelisa zavela kwangoko kwiminyaka yee-1950. Nangona kunjalo, kude kube kutshanje, iindleko zokwenza iidayimani zokulima zaqala ukwehla kakhulu kunexabiso leedayimani zemigodi.
Inkqubela phambili yenzululwazi kunye netekhnoloji izinciphisile kakhulu iindleko zokuvelisa iidayimani eziveliswa elebhu. Ngokubanzi, indleko zokulima iidayimani yi-30% ukuya kwi-40% esezantsi kunexabiso leedayimani zemigodi. Ngubani okhuphisana naye ekugqibeleni? Ngaba yidayimani yemigodi eyakhiwe ngokwendalo phantsi komhlaba, okanye ngaba kukulima kweedayimani ezenziwe yitekhnoloji?
Ilabhoratri yokulima iidayimani kunye nedayimani yemigodi inezinto ezifanayo zomzimba, zemichiza, kunye nezinto ezibonakalayo kwaye ijongeka ngokufana nedayimani yemigodi. Kwiindawo ezinobushushu obuphezulu kakhulu kunye noxinzelelo oluphezulu, iilebhu ziphuhlisa iidayimani ukulinganisa amanyathelo edayimani yemigodi, ikhula ukusuka kwimbewu yedayimane encinci iye kwiidayimani ezinkulu. Kuthatha iiveki ezimbalwa kuphela ukuphuhlisa idayimane elebhu. Nangona ixesha lokumba iidayimani liphantse lafana, ixesha elithathileyo ukwenza iidayimani zangaphantsi libuyela kumakhulu ezigidi zeminyaka.
Ukulinywa kwedayimane kusesencinci kwimarike yokuthengisa ngamatye anqabileyo.
Ngokwengxelo kaMorgan Stanley Investment Company, ukuthengiswa okurhabaxa kweedayimani eziphuhliswe elebhu kwaqala kwizigidi ezingama-75 ukuya kwezingama-220 ezigidi zeedola zaseMelika, eyi-1% kuphela yentengiso yehlabathi yeerayim. Nangona kunjalo, ngowama-2020, uMorgan Stanley ulindele ukuba ukuthengiswa kwedayimani okuveliswe elebhu kuya kuba yi-15% yentengiso yeedayimani ezincinci (0.18 okanye ngaphantsi) kunye ne-7.5% yedayimani ezinkulu (i-0.18-carats nangaphezulu).
Imveliso yeedayimani ezilinywayo nayo incinci kakhulu ngoku. Ngokwedatha evela kwiFrost & Sullivan Consulting, ukuveliswa kweedayimane ngo-2014 yayizii-carats ezingama-360,000 kuphela, ngelixa imveliso yedayimani eyayimbiwa yayizizigidi ezili-126 zeekati. Inkampani yokubonisana ilindele ukuba iimfuno zabathengi zexabiso elingenaxabiso ziya kukhulisa imveliso yedayimani eqokelelwe kwi-20 yezigidi ngo-2018, kwaye ngo-2026 iya kunyuka iye kwizigidi ezingama-20.
I-CARAXY Diamond Technology nguvulindlela kwimarike yasekhaya yokulima iidayimani kwaye ulilungu lokuqala le-IGDA (uMbutho waMazwe ngaMazwe wokuLima iidayimani) ukuqhuba ushishino eChina. Umnumzana Guo Sheng, umphathi wenkampani, unethemba malunga nokuphuhla kweemarike kulimo lwedayimani.
Oko kwaqala ishishini ngo-2015, intengiso yedayimani ka-CARAXY evelise ilabhoratri iphindaphindwe kathathu kwintengiso yonyaka.
I-CARAXY inokulima iidayimani ezimhlophe, iidayimane ezimthubi, iidayimani eziluhlaza kunye nedayimane ezipinki. Okwangoku, uCARAXY uzama ukulima iidayimani eziluhlaza nezimfusa. Uninzi lweedayimani ezikhulileyo elebhu kwimakethi yaseTshayina zingaphantsi kwe-0,0 carat, kodwa iCARAXY ithengisa iidayimani ezinokufikelela kwiinqwelo ezi-5 ezimhlophe, mthubi, luhlaza okwesibhakabhaka kunye needayimani ezi-2-carat.
U-Guo Sheng ukholelwa ukuba inkqubela-phambili kwitekhnoloji inokuphula umda wobungakanani bedayimane nombala, ngelixa inciphisa iindleko zokusika idayimani, ukuze abathengi abaninzi babe nokufumana umtsalane wedayimani.
Ukhuphiswano phakathi kwezothando kunye netekhnoloji luye landa ngokuqina. Abathengisi bamatye anqabileyo ayenziwa bayaqhubeka bekhalazela abathengi ukuba ukuxhaphaza iidayimani kubangele umonakalo omkhulu kwindalo esingqongileyo, nakwimibandela yokuziphatha efanelekileyo ebandakanyeke “kwidayimani yegazi.”
IDayimane Foundry, inkampani yedayimani eUnited States, ithi iimveliso zayo "zithembekile njengamaxabiso akho." ULeonardo DiCaprio (iPlum encinci), owayedlala imovie kumdlalo bhanyabhanya wegazi ngo-2006, wayengomnye wabatyali mali kwinkampani.
Ngo-2015, iinkampani ezisixhenxe ezinkulu zemigodi yedayimani zakha i-DPA (Umbutho wabavelisi beDayimani). Kwi-2016, basungula iphulo elibizwa ngokuba yi "Real ayinqabile. Inqabile idayimani. ”
Imigodi yeedayimani ezinkulu zeDe Beers zenza i-akhawunti yesinye kwisithathu sentengiso yehlabathi, kwaye isigebenga sinethemba malunga needayimane zokwenziwa. UJonathan Kendall, ongusihlalo weDe Beers International Diamond Grading and Research Institute, uthe: “Senze uphando olubanzi lwabathengi kwihlabathi jikelele kwaye asifumananga ukuba abathengi bafuna iidayimani zokwenziwa. Babefuna iidayimani zendalo. . ”
”Ukuba ndikunika idayimani eyenziweyo kwaye ndithi kuwe 'Ndiyakuthanda', awuzukuchukunyiswa. Iidayimani zokwenziwa azibizi mali ininzi, ziyacaphukisa, azikwazi ukudlulisa naziphi na iimvakalelo, kwaye ayinakuchaza ukuba ndiyakuthanda. ” UKendall wongeze iNdlela.
UNicolas Bos, usihlalo kunye ne-CEO yejewellery yaseFrance uVan Cleef & Arpels, uthe imveliso yeVan Cleef & Arpels ayinakuze isebenzise iidayimani zokwenziwa. UNicolas Bos uthe isithethe sikaVan Cleef & Arpels kukusebenzisa kuphela ubuncwane bemigodi, kwaye amaxabiso "axabisekileyo" axhaswe ngamaqela abathengi ayisiyiyo elebhu elima iidayimani.
Ibhanki engaziwayo yebhanki yotyalo-mali phesheya kwezilwandle ejongene nokudibana kwamashishini kunye nokuthengwa kwempahla kudliwanondlebe ne China Daily ukuba ngotshintsho oluqhubekekayo lweendlela ezisetyenziswa ngabantu kunye nelahleko ngokuthe ngcembe yomtsalane “wedayimani ehlala ixesha elide”, iidayimani ezenziwe ngabantu qhubeka ukwanda. Ngenxa yokuba iidayimani ezilinywe ngokungeyonyani kunye needayimani zemigodi zendalo ziyafana ngokufana nenkangeleko, abathengi batsaleleka kumaxabiso afikelelekayo ngakumbi kwiidayimane ezilinywayo.
Nangona kunjalo, umnini-bhanki ukholelwa ekubeni ukuxhaphaza iidayimani kunokuba kufaneleke ngakumbi kutyalo-mali, kuba ukwehla kwedayimani yemigodi kuya kubangela ukuba amaxabiso abo anyuke ngokuqhubekayo. Iidayimani ezinkulu ze-carat kunye needayimane ezinqabileyo eziphakamileyo ziya kuba ziintliziyo zabantu abazizityebi kwaye banexabiso elikhulu lotyalo-mali. Ukholelwa ukuba ukulinywa kwelabhoratri yedayimane yeyona nto incedisayo kwimarike yabathengi.
Uphando luqikelela ukuba imveliso yeedayimani ezigrunjiweyo izakunyuka ngo-2018 okanye ngo-2019, emva koko imveliso izokwehla kancinci kancinci.
UKendall ubanga ukuba ukuhanjiswa kwedayimani yakwaDe Beers nako kunokuxhasa “amashumi ambalwa eminyaka”, kwaye kunzima kakhulu ukufumana umgodi omtsha wedayimani.
U-Guo Sheng ukholelwa ukuba ngenxa yomtsalane wabathengi, imarike yomtshato yomceli mngeni kumalabhoratri okulima iidayimani, kodwa njengempahla yemihla ngemihla yobucwebe kunye nezipho zobucwebe, ukuthengiswa kweedayimani eziveliswa elebhu kukhule ngokukhawuleza.
Ukuba amatye anqabileyo athengiswa ngezinto zendalo kumatye endalo, ukunyuka kweemarike zamatye anqabileyo nako kunokuba sisongelo kubathengi.
UDe Beers utyale imali eninzi kwitekhnoloji yokuhlola idayimane. Isixhobo sayo sakutshanje sokuhlola idayimani, i-AMS2, siza kufumaneka ngoJuni. Umanduleli we-AMS2 khange akwazi ukufumana iidayimani ezingaphantsi kwe-0.01 carat, kwaye i-AMS2 yenza ukuba kube lula ukufumana iidayimani zincinci ezimalunga ne-0.003 carats.
Ukwahlula kwiidayimani zemigodi, iimveliso zeCARAXY zonke zibhalwe njengelabhoratri ekhulisiweyo. Bobabini uKendall noGoo Sheng bakholelwa ekubeni kubalulekile ukukhusela kunye nokwenza ngcono ukuzithemba kwabathengi kwintengiso ukuze abathengi bezacholo bazi ukuba zeziphi iidayimani abazithengayo ngexabiso elikhulu.
Ixesha Post: Jul-02-2018